इटाली ट्रेन स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा इटाली > इटाली ट्रेन स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल
इटाली, युरोप सबैभन्दा लोकप्रिय को एक छुट्टी गन्तव्यहरू, यो सबै छ. एक धनी सांस्कृतिक इतिहास, शानदार होटल, विश्व-प्रसिद्ध भोजन, वास्तुकला, प्राकृतिक सौन्दर्य को साइटहरु ... र त्यसपछि त्यहाँ किनमेल छ! रेल द्वारा इटाली यात्रा एक मनोरम अनुभव. तपाईं सबै आनन्द प्राप्त रमणीय दृश्य बरु एउटा विमान बन्द dozing बाटो साथ. एक पटक तपाईं आफ्नो चुनिएको शहर पुग्न, त्यहाँ असंख्य छन् ठाँउहरु बस्नको लागि. तपाईंको यात्रा थप सुविधाजनक बनाउन, को तिनीहरूलाई प्रत्येक एक मात्र पत्थर गरेको फेंक - हामी माथि केही उच्च मूल्याङ्कन होटल राउण्ड गर्नुभएको रेल स्टेशन. यी इटाली रेल स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल हो.
हाम्रो पहिलो सर्वश्रेष्ठ इटाली रेल स्टेशन नजिकै होटल हो – फ्लोरेन्स फिरंज सान्ता मारिया Novella ट्रेन स्टेशन
महान् होटल अपोलो बस 300m फ्लोरेन्स गरेको सान्ता मारिया Novella ट्रेन स्टेशन हो. यो ऐतिहासिक होटल फिर्ता तिथिहरु 19th शताब्दी र छ एक छत को ऐतिहासिक केन्द्र अनदेखी छत इटाली पुनर्जागरण शहर, फ्लोरेन्स.
यो होटल कला रुचि यात्री लागि सही विकल्प छ, संस्कृति, र खाना. यो सबै प्रमुख साइटहरूबाट केही मिनेट छ. तपाईंले आफ्नो अगाडि ढोका बाहिर सान्ता मारिया Novella देख्न सक्नुहुन्छ, र बस एक किलोमिटर भित्र, तपाईं पनि फ्लोरेन्स गिरजाघर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, Piazza डेला Signoria, पुरानो ब्रिज, र पिट्टी दरबार.
केही किनमेल लागि देख वा खान एक खानको? सैन लोरेन्जो बजार वा सन्त'अमब्रोगियो बजारमा टहल लिनुहोस् र खानाको लागि बुक्का मारिया वा जिलेटेरिया ला कैरिया भ्रमण गर्न निश्चित गर्नुहोस्।.
भियना फ्लोरेन्स गाडिहरु गर्न
मिलान मिलान Porta Garibaldi ट्रेन स्टेशन
फैशन मिलान खेल को नाम हो - त्यसैले आधुनिक Tocq होटल भन्दा रहन कहाँ राम्रो? होटल केन्द्रीय मिलान स्थित छ, त्यसैले famed मार्फत Montenapoleone, Sforzesco महल, र ला Scala थियेटर एक 2km अर्धव्यास भित्र सबै छन्, ठाँउहरु सजिलै हिड्न मिल्ने बनाउन. को Duomo मिलान नजिकैको पनि छ, बस भन्दा 2km टाढा.
तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ छौँ टाउको बाहिर रमाइलो गर्न रोमाञ्चक nightlife प्रसिद्ध कोमो सडक, बस स्थित 100 टाढा मीटर. को पाठ्यक्रम, Corso नाइस पनि हलचल छ दिन - साथ हिप बारहरू र नाइटक्लब, यो vibey पैदल सडक पनि उच्च फैशन स्टोर दावा र उम्दा रेस्टुरेन्ट. किनमेल गरेको छैन? हामी तपाईंलाई दोष छैन! Via Vincenzo Capelli सडक एक यात्रा र ब्रेरा जिल्ला.
इटाली रेल स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल – नेपल्स – केन्द्रीय ट्रेन स्टेशन
रेल स्टेशन नजिकै हाम्रो अन्तिम सर्वश्रेष्ठ होटल इटाली छ मा को UNA होटल नापोलि, नेपल्स मा केन्द्रिय रेल स्टेशन विपरीत स्थित एक authentically पुनःस्थापित ऐतिहासिक भवन. होटल पट्टी छत मा एक पेय आनन्द, जो VESUVIUS ज्वालामुखी एक दृश्य छ. तपाईं दृश्यमा एक सानो नजिक प्राप्त गर्ने निर्णय भने, तपाईं एक लाग्न सक्छ छोटो रेल सवारी पम्पी र माउन्ट VESUVIUS हेर्न.
त्यहाँ धेरै अविश्वसनीय ऐतिहासिक स्थानहरू नजिकै, त्यसैले यदि तपाईं नेपल्स लामो बसाइ बनाउन. तपाईं नेपल्स को गिरजाघर गर्न हिंड्न सक्षम, सन्त Chiara, सान Gregorio Armeno, सान Lorenzo Maggiore, राष्ट्रिय पुरातात्विक संग्रहालय, साथै ऐतिहासिक शहर को केन्द्र मा Duomo सडक रूपमा. तपाईं पनि नापोलि Sotterranea मा शहर अन्तर्गत जान सक्नुहुन्छ.
रोम मा रोम Termini ट्रेन स्टेशन
आकर्षक एनएच संग्रह रोमा पालाजो सिनकेन्सेन्टो एक--तारा सुन्दरता हो जुन रोमको मुख्य रेलवे स्टेशनको नजिकै अवस्थित छ र यसले मुरा सेवानीको बगैंचा र पुरानो भग्नावशेषहरूका बारे हेराइ राख्दछ।. तपाईं खुट्टा मा अनन्त शहर अन्वेषण जस्तै लाग्छ भने, तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ. तपाईं त टाउको सक्नुहुन्छ धेरै आकर्षण 2km नजिक भन्दा टाढा: को Coliseum, स्पेनी चरण, Trevi छहरा, राष्ट्रिय संग्रहालय रोम को, Teatro dell'Opera di रोम, सन्त मारिया Maggiore, चर्च सान्ता Susanna, र स्पेनिश चरण.
तपाईं सबै कि पर्यटन पछि पनि थकित हुनुहुन्न भने, दिन र रेस्टुरेन्ट द्वारा किनमेल दावा जो राजधानी शहरको प्रसिद्ध मार्फत डेल Corso एउटा बस मा हप, बारहरू र क्लबहरू राती. हामी तपाईंलाई इटाली रेल स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल को कुनै पनि आफ्नो बसाइ प्रेम छौँ निश्चित हुनुहुन्न.
तपाईंले पहिले कुनै पनि भ्रमण छ? हामीलाई tweeting हामीलाई थाहा दिनुहोस् @SaveATrain! कुनै प्रश्न? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस मा SaveATrain.com र तपाईंले कहिल्यै रेल स्टेशन नजिकै सर्वश्रेष्ठ होटल पाउन आवश्यक भएमा, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hotels-near-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
रेल स्टेशन रेल यात्रा यात्रा